Rio de Janeiro - I LOVE RIO- UKUPHILA
Rio de Janeiro isibe iphayona international ukuzibophezela yayo umzimba, impilo kanye yengqondo nenhlalakahle.
I LOVE Rio ezambula imfanelo imibuso, ukuzilibazisa , amathiphu namasu, kusukela Carioca ukugijima gyms endlini futhi ongaphandle, yoga, ukuzindla, futhi amathiphu nutritional zamuva. Spas, retreats, supplements nokunakekela siqu zibhekiwe, ngokuletha izakhamuzi nezivakashi Ukuqhamuka siqonde indlela bazakhele nokuthuthukisa kokubili umzimba nengqondo.
impilo, babehlala ngaphandle, futhi komphakathi
Yokuphilae Rio de Janeiro zihluke njengayo ubunjalo obusisa umuzi futhi njengoba ezibanzi njengoba isiko ukuthi kuthuthukisa it.
Kukhona omakhelwane phezu 160 emzini, ngamunye izici zayo siqu ezindawo kanye zasemadolobheni, ekwakheni ukuphila cariocas ngakhoke - kanti ezinye izifunda kukhona emabhishi umbukwane ekhaya, ezinye izingxenye ezithile zedolobha babe Rainforest Atlantic, eyingqopha izakhiwo, noma langa amapaki idolobha ukuba siziqhenye.
Izintaba, emabhishi, amahlathi kanye namachibi entwine ngokwehlukahlukana kanye namasiko sokulandela abahlehlela emuva kubantu Indigenous futhi esithathe kabanzi sokugona Afrika kanye namagugu European, okuvumela cariocas ukujabulela emzini in a inkulungwane ngezindlela.
odumile umfanekiso a wabeka-back and ekhululekile yokuphila ongaphandle, abaphilayo Carioca kuhlanganisa anhlobonhlobo ezinye izici Sisizwa bendabuko izimpande yamasiko labantu, futhi yanda futhi asathuthuka kanye kwembulunga yonke lomuzi kanye Brazil.
Uhlelo Rio de Janeiro esimangalisayo namathafa zemvelo kanye sezulu delightfully afudumele, kanye Nemvelo ogxile social, ukuyenga izakhamuzi ukuchitha isikhathi sabo bengaphandle futhi uku in the ubuhle umuzi kanye nenkampani ezimnandi yabanye - isitatimende sociability eliyingqayizivele futhi nobungane cariocas.
obehlela sonke imisebenzi, kuyinto kugcizelelwa esicacile komphakathi kanye ukujabulela ukuphila futhi ukwazisa zonke izici zalo weqiniso, ngenhloso propensity esiqondile for the bengaphandle.
Ngaphezu kwalokho konke edolobheni elikhulu kufanele anikele, yokuphila eRio de Janeiro kuhlanganisa mix enviable imisebenzi ngaphandle, yokuphila enempilo, informal and ngokurhaba imibuthano yokuzijabulisa, ezemidlalo umkhuba, futhi esiyikhethayo ebukekayo ezifana nokudoba futhi ezindizayo ikhayithi.
In ukwazisa labantu sika lwekucocisana nendawo yabo yemvelo futhi Ukuthanda nabangane, uhulumeni uye wangisekela futhi ithuthukiswa imfanelo nemikhuba ngaphesheya komuzi ngokusebenzisa izenzakalo, imincintiswano futhi kudalwa izikhala zokungcebeleka kanye nemithombo.
Amabhizinisi eziningana ngasese futhi bheka ukuze bamukele uhlobo asebenzayo futhi ongaphandle izakhamuzi futhi neqhaza ngokunikela amakilasi kanye nemisebenzi ukuthuthukisa imfanelo futhi kuthuthukise namakhono, ukugcina elinganisene izimfashini zamuva emhlabeni ngenkathi enikeza kube spin Carioca.
Nemvelo oluthinta ngqo yokuphila eRio de Janeiro - An ingxenye umxhwele labantu kulo muzi nothando kucocisana nendawo yabo yemvelo: okunezinhlobonhlobo eyingqayizivele emabhishi zasemadolobheni, ulwandle-side amachweba, amapaki yemvelo, izingadi, amahlathi, nezintaba rocky.
Isimo sezulu esifudumele kwenza ezemidlalo kanye imfanelo ukuzilibazisa yonke liyakhanga futhi ngaso zonke park and beach more umuntu angathola amabutho running cariocas, wamabhayisikili, ukuzivocavoca ukudlala imidlalo.
Izakhamuzi nezivakashi komuzi enze njalo Uhambo up entabeni ukuthi ikhulise amapaki omkhulu wedolobha elikhulu ezifana 'Parque da Tijuca' noma 'Parque da Pedra Branca', ukuxova ngokusebenzisa emahlathini up rocks ukujabulela imibono kwemilingo umuzi nxazonke futhi ngezansi.
Long ibhayisikili ugibele ithathwe emhlabeni amachweba eziningana wedolobha ezifana 'lagoa rodrigo de Freitas' abadumile noma eduze inqwaba emabhishi, kanti ababhukudi, amatilosi Surfers populate amatheku ezimbili bese amanzi kolwandle.
Popular Fisherman elula ezisogwini kakhulu futhi football, volleyball futhi imfanelo umzimba olwenziwe elula sandy e bengaphandle afudumele.
Kusukela ekuphumeni kwelanga futhi luyaqhubeka kahle ngemva kokushona kwelanga, zonke emabhishi main emzini ekhaya abantu obonisa noma ebuthana amaqembu ukudlala futhi excercise - okuningi njengoba asebekhulile ujabulele zasekuseni kosuku, abaningi emva-school izinhlangano ukufundisa lezinyawo futhi volley ball ukuba nezingane zabo bonke ubudala.
Ukwamukela ezemidlalo kanye umzimba abavela ezingxenyeni eziningi zomhlaba, yoga is Namuhla kabanzi njengelinye lamazwe imisebenzi okunomsoco kakhulu umzimba nengqondo futhi amakilasi ethandwa ingatholakala at gyms, emabhishi namapaki yonkana Rio - With inhlanganisela yakhe abanamakhono aqondisa ngokomzimba nokuthula ukuzindla kube manje wayekwenza ngisho surf emabhodini ukuma-up izungezwe amanzi ezintantayo.
Uxhumano ejulile nemvelo, impilo, kanye nesifiso ukujabulela ngokugcwele ukuphila wakwenza ukuze abagibeli abaningi ukusebenza ukufika kwabo izindawo ehhovisi e yezemidlalo izingubo, lifake umsebenzi-out in onkhe yabo yansuku zonke kanye nokwenza okuhle ukuswela.
Ngokuvamile, izisebenzi eziningi shiya attires beneminyaka endaweni yabo yokuqashwa, ukuze kungabikho isikhathi esichithekayo kanye nemisebenzi ongaphandle ingajatshulelwa belibangise, futhi emva komsebenzi.
Sezulu Warm kusho imisebenzi yangaphandle social - Cariocas ngokuvamile ubuthe bengaphandle, ezigcawini, imigoqo, amapaki namabhishi, abenze kuphela evulekile abantu ezintsha futhi izindawo, kungenzeka ukuthi kube for imicimbi yosikompilo yezemidlalo, noma isici isonto ekupheleni Barbeque ingxenye Emikhayeni eminingi Carioca.
Lokhu ngobuhlobo no bengaphandle uye wanakekelwa nokuqwashisa eqinile sezulu - cariocas abaningi bayakwazi ukubikezela ngobuciko umxhwele uma kwamafu nemvula abasondela.
yokuphila namasiko nemikhuba athuthukiswe kanye ahlangane akhe yaba nomunye kusukela kokubili mayelana nemvelo kanye namagugu - umphumela kungabonakala the ezihlukahlukene kakhulu izindlela, emisebenzini esukela ukudoba zokungcebeleka nasekuboniseni umculo wokuzijabulisa imikhosi wobuciko.
namagugu uye emise kokubili umlando emzini, futhi indlela izakhamuzi zayo bewuthanda - mculo kuhlanganiswe ezicini eziningi zokuphila emzini, ekubeni yingxenye wemikhosi yenkolo, amakhonsathi exhasiwe idolobha-futhi ukusebenza live okuningi njengoba okungahleliwe beach izinsuku nge boom -box on the esihlabathini.
Ukudla Fresh uyingxenye ebalulekile yokuphila wendawo - A sici ebukekayo futhi longstanding of the isimiso samasonto onke Carioca ethenga ukudla embukisweni wendawo, lapho amakhasimende ukuxhuma ngqo umkhiqizo ezweni labo.
Njalo ezingomakhelwane ine izithelo okungenani owodwa masonto onke futhi emakethe yemifino, lapho amakhasimende amble kanye nenkundla bephakamise ngokukhetha kakhulu izithako ayetholakala ngamanani ezifanele, ngokunambitha amasampula okumnandi futhi ukuxoxa ngokwenama nabanye bendawo kanye abathengisi.
Impilo yansuku zonke nemikhuba Kuye enqunywe futhi kuthonywa isici Carioca syncretism - Abanye esiyikhethayo eyangezikhathi ekuseni impucuko bomdabu, kanti eminye imisebenzi, imikhuba kanye nokudla ususelwe izifiki zaseYurophu kanye nabantu Afro-Brazilian.
Kusukela ngaphambi ikoloni isiPutukezi eBrazil Ukudoba imiphakathi ikhona, kanti ubuciko ezibalulekile amasosha ka 'capoeira' futhi affiliations eziningi ezingokomoya Umsuka yabo emasikweni Afrika.
Ngokufanayo, Rio de Janeiro has a ingcebo enkulu bendabuko cuisine kazwelonke izimpande in a ezihlukahlukene zamasiko.
Uhulumeni imatasa lula ubuhlobo cariocas 'obuqinile eziyizungezile, futhi ekuqinisekiseni ukuthi kezamagugu nendabuko liyagcinwa - kokubili imikhankaso zemfundo kanye nengqalasizinda zanamuhla yomzamo sibhekiswe ngcono futhi babangela ngendlela enempilo.
Eminyakeni yamuva, izikhungo zikahulumeni waqalisa ezihlukahlukene creative izinhlelo ukuqwashisa, ugqozi ukukhuthaza enempilo futhi emihle yokuphila ukukhetha.
Njengoba yokuphila kuwumphumela izici eziningi ahambisanayo, kuhlanganise ukusetshenziswa ukudla okunempilo, uhulumeni kazwelonke ezikhishwe iqoqo iziqondiso wezokudla, ukunikela iseluleko esihlakaniphile esikweyoku on sizodlani, indlela engcono yokulungiselela izitsha, futhi kanjani kangcono ukukujabulela.
Iziqondiso ezikhuthaza ukusetshenziswa izithako zemvelo, ukugwema processing ezimbonini, futhi ukutshala a ehlanganyelwe isiko Culinary, lapho imindeni ukuthenga, ukupheka futhi ujabulele ukudla ndawonye - lendlela ezintsha yokuphila ongenakuzihlukanisa yokudla kanye nokuphila impilo enhle, itshe legumbi of Carioca yokuphila.
Sikahulumeni Rio de Janeiro sika njalo sponsors zokukhangisa imikhankaso, kanye ezihlukahlukene free gyms ongaphandle naseduze-ngezinga imincintiswano kanye nemisebenzi kulo lonke idolobha, egcizelela ezibanzi langa izikhala zemvelo kanye nezakhiwo umuntu-owenziwe kungatholwa yinoma wonke cariocas.
Umxhwele idolobha-wide ibhayisikili izindlela sekwakhiwe, kanye isikeyiti amapaki amasha, ukuba democratize ukufinyelela zomphakathi futhi kugqugquzelwe ezihlukahlukene imfanelo imisebenzi - emabhishi kakhulu kuba Rio de Janeiro anemisila gyms ezincane free ukusebenzisa, kuyilapho izifunda eziningi yedolobha kukhona ekhaya zomphakathi kanye zanamuhla ezivulekile gyms for the asebekhulile.
Ukungeza ukuze exhaswa emzini ngamabhayisekili izindlela, amabhizinisi angasese baye benza atholakale amabhayisikili umphakathi ukuthi kungaba kuqashwe futhi behliswa kalula yonkana Rio de Janeiro, eminye ukugqugquzela yokuphila iyasebenza, futhi umbuso wentsandvo yelinyenti izikhala.
Inani kwamabhizinisi azimele zinikeza amakilasi kanye nemisebenzi group, uyazi isifiso cariocas 'ukuba bahlanganyele nendawo yabo futhi wabelane nakho kwabo komunye nomunye.
Dance, umculo, ukupheka, ubuciko bokulwa surfing izifundo abe ngendlela eshaya ibe umlando onothileko elizwakalayo enezela repertoires siqu.
Ekhazimulayo iminikelo Umuzi yemvelo, kuhambisana kwatheleka yayo njalonjalo imikhuba abavela kuwo wonke umhlaba, aye akha zakhe isithombe ocebile amasiko kanye ubunikazi; sivumele ezihlukahlukene zokuphila Carioca ukuthi, ngenkathi ezibonakala ezahlukene, konke ukugubha uthando ukuphila nokubaluleka abanye.
Nsuku zonke Carioca imikhuba, imikhuba kanye bathanda nazo tikhombise.
Kusukela nokubaluleka okungokomlando kuka emzimbeni, ezimweni zengqondo nezindlela encomekayo wezokuThutha, holiday isiko, lapho ukuze izinwele ukusika noma uhambe for a ukwelashwa ubuhle, futhi amabala engcono ukubukela entshonalanga, I LOVE Rio amashadi nokuthambekela popular ukuthi kwenza usuku nosuku ukwakheka ukuphila Carioca.